Elunxwemeni-I-WIFI YAMAHHALA & NENETFLIX - I-Airbnb
Elunxwemeni-I-WIFI YAMAHHALA & NENETFLIX
I-Sur la Plage yindawo yabucala, enobunewunewu, kwaye izimele ngokupheleleyo, igumbi elinye lokulala elenzelwe ukuba abantu abatshatileyo babaleke.Ibonelela ngokupheleleyo ngayo yonke into oya kuyidinga ngokuhlala kwakho, nokuba kungobusuku obunye okanye inyanga enye.
Ngena kwigumbi lokuhlala elivulekileyo elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo - i-cooktop, i-oven, i-microwave, ifriji enkulu / ifriji, zonke iimbiza kunye neepani, izitya, izitya, izitya zokubhaka kunye neepani, i-toaster, i-blender, kunye nomatshini wokuhlamba. Izitya zokupheka kunye nezibonelelo zinwenwela ngaphaya kweemfuno ezisisiseko, ngoko ke ukuba unqwenela ukwenza i-roast yesidlo sangokuhlwa, okanye ukubetha iqebengwana, yonke into ikhona ukuze upheke ukuneliseka kwentliziyo yakho!
Embindini weflethi uya kufumana igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinebhafu ye-spa yabantu ababini ukuze uthobe amaxhala akho, ishawa nge-massaging shower rose, kunye neyomlungiseleli okhawulezayo, i-ceramic & ionic hairdryer.
Okokugqibela sifika kwigumbi elikhulu lokulala elinebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi, isambatho esakhelwe ngaphakathi kunye nesinxibo, iTV enkulu enofikelelo lweNetflix, indawo yedesika yeendwendwe zamashishini, kunye negumbi lokuphumla lesibini elithokomele elijonge ibalcony egcwele ilanga enendawo yokutyela yangaphandle kunye negumbi lokuhlambela elinomgangatho ophantsi. iBBQ; indawo efanelekileyo yokugoba ngencwadi elungileyo ngaphakathi okanye ngaphandle, okanye ukonwabele ibrekkie ephekwe ekhaya kumoya omtsha wolwandle.
Yiba noxolo lwengqondo ngexesha lokuhlala kwakho, njengoko iSur la Plage inendawo enye eyabelweyo kwindawo yokupaka imoto engaphantsi.
Yonwabele yonke into iCowes inokukubonelela ngonxweme lwasekhaya kumnyango wakho, kwaye umgama nje omfutshane ukuya kwiziko eliphambili elineevenkile ezinkulu ezimbini, iivenkile zefashoni kunye nezaphulelo, iivenkile zokutyela kunye neeresityu.
Ukulala oku-2 kuphela - Ilinen esemgangathweni yelinen kunye neetawuli zibonelelwa ngokuhlala okunethezeka.
I-Intanethi engenazingcingo ekhawulezayo (NBN)
Umatshini weKofu yePod
Iipodi zekofu, iTi kunye nobisi zinikezelwe ukuze uqalise iholide yakho
Ijegi yesihluzi samanzi
IiTV zeSkrini eziMcaba
I-Alarm Clock Radio
Ibhodi yeAyini kunye nokuAyina
Ipropati yam kunye nesakhiwo sinomgaqo-nkqubo wokungatshaywa.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nam.
Ndijonge phambili ekukumkeleni ukubaleka kwakho.
4.91 · Izimvo eziyi-291
Ndiyayithanda le ndawo, kanye ngaphaya kwendlela ukusuka elunxwemeni, kunye nohambo olufutshane ukuya kwindlela enkulu yaseCowes. Yonke into isondele kakhulu!
Ndiseholideyini eSiqithi ngamaxesha athile kodwa andihlali apho. Ndithumelela iindwendwe ikhowudi ekhuselekileyo nge-AirBnB ngomhla wokufika, ke nceda uqinisekise ukuba unayo iakhawunti yakho esandleni.Ndihlala ndifumaneka ngomnxeba, kwaye kunjalo nge-AirBnB ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Ndiseholideyini eSiqithi ngamaxesha athile kodwa andihlali apho. Ndithumelela iindwendwe ikhowudi ekhuselekileyo nge-AirBnB ngomhla wokufika, ke nceda uqinisekise ukuba unayo iakha…